Puntland iyo Somaliland oo is-dhaafsan doona maxaabiistii dagaalkii Tukaraq - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntland iyo Somaliland oo is-dhaafsan doona maxaabiistii dagaalkii Tukaraq
May 27, 2019 Puntland Mirror Somalia, Somaliland 0
Xabsi kuyaala Puntland. [Isha sawirka: AFP]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland iyo Somaliland ayaa isku afgartay in is-dhaafsadaan maxaabiistii dagaalkii Tukaraq, sida ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo ay sheegeen.
Maxaabiis is-dhaafsiga oo ay fududeynayso haayada ICRC ayaa la filayaa in uu dhaco bisha soo socota ee June, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray.
Ku dhawaad 20 askari oo ka soo kala jeeda labada dhinac ayaa lagu qabtay dagaalkii deegaanka Tukaraq sanadkii 2018.
November 10, 2018 Saldhiga milatariga Imaaraatka Carabta ee Berbera oo la furayo bisha June
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ciidamada amaanka Soomaaliya ayaa xiray wargeys sidoo kalena xabsiga dhigay tifaftirihii wargeyska, sida shalay oo Axad ahayd ay sheegeen ururka suxufiyiinta Soomaaliya. Ciidamada sirdoonka ayaa habeenimadii Sabtida weeraray xafiisyada Xog Ogaal, iyaga oo [...]